आमालाई गुमाउनु पर्दा रोकिएनन् रवि ओड का आँशु ! - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
आमालाई गुमाउनु पर्दा रोकिएनन् रवि ओड का आँशु !
काठमान्डौ , रबि ओड अहिले सेती अन्चल आस्पताल परिसर मै छन् । उनका आखा मा नरोकिएका आँशु अनि शुभचिन्तकको फोनले हृदय छिया छिया भएको मन समाल्न खोज्छन तर सक्दैनन । नेपाल आइडल सिजन- २ का विजेता रवि ओड की आमा विष्णादेवी ओडको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो ।
बुधबार बिहान पम्पबाट पानी तान्ने क्रममा करेन्ट लागेपछि घाइते विष्नादेवीलाई अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहान ७ बजेतिर उनी पानी तान्ने पम्प चलाउन गएकी थिइन्। तर अघिल्लो दिन करेन्ट नछुटाइएको पम्पबाट उनलाई करेन्ट लागेको हो ।
‘नेपाल आइडल’ को खुसी मनाउँदै गरेका रवि ओडको परिवारमा ठुलो बज्रपात, ४५ वर्षिय आमाको निधन !